Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha korantada Graphite | Shiinaha Graphite koronto Warshad
EDM Electrode / Graphite Caaryada
EDM waxay leedahay faa'iidooyinka saxnaanta mashiinka sare, tayada sare ee dusha sare iyo kala duwanaanta mashiinada balaaran, gaar ahaan mashiinka daloolka caaryada ee isku-dhafan, saxan, dhuuban-dhuuban, jeexitaan cidhiidhi ah iyo qalab adag oo adag, taas oo leh faa iidooyin ka badan xawaare-xawaare sare. EDM wali waxay ahaan doontaa habka ugu muhiimsan ee mashiinka daloolka caaryada.
Saxanka Graphite anode ee elektrolysis-ka
Qolka elektroolka, elektroolka uu hada qulqulayo elektrooniga waxaa lagu magacaabaa saxanka garaafka anode. Warshadaha korantada, anode guud ahaan waxaa loo sameeyaa qaab saxan, marka waxaa loogu yeeraa saxanka garaafka anode. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa koronto-dhalinta, daaweynta biyaha wasakhda ah, qalabka ka hortagga daxalka ee warshadaha ama sida qalab gaar ah. Saxanka anode Graphite wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga heerkulka sare, habdhaqanka wanaagsan iyo kuleylka kuleylka, farsamaynta fudud, xasiloonida kiimikada wanaagsan, aashitada iyo u adkaysiga daxalka alkali iyo ash ash hooseeya. Waxaa loo isticmaali karaa electrolyzing xalka aqueous, samaynta koloriin, soodhaha caustic, iyo samaynta alkali ka xal electrolyzing cusbo. Tusaale ahaan, saxanka garaafka anode ee loo yaqaan 'graphite anode plate' waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay anode tabinta sameynta soodhada caustic ee laga helo xalka milixda ee elektarooga.
Ka saar kubbada garaafka
Graphite ma laha barta dhalaalida. Waxay leedahay habdhaqan wanaagsan, adkeysi heerkul kulul, oo waxaa loo isticmaali karaa EDM deggan. Graphite wuxuu leeyahay farsamo aad u fiican. Marka la barbardhigo birta, waxaa looga baaraandegi karaa koronto waqti aad u gaaban, kaliya 1/3 ilaa 1/10 waqti marka la barbar dhigo birta.
Warshadaha tamarta cusub
Adeegsiga tikniyoolajiyadda garaafku waa goob muhiim u ah tamarta cusub, gaar ahaan warshadaha la xiriira baabuurta.
Mashiinka dheecaanka korontada (EDM) waa natiijada ka dhalata daxalka korantada inta lagu jiro dheecaanka garaaca wadnaha ee u dhexeeya korantada. Sababta ugu weyn ee daxalka dhimbiil koronto ayaa ah in qadar badan oo kuleyl ah laga soo saaro kanaalka dhimbiilaha inta lagu jiro dheecaanka dhimbiilaha, kaas oo ah mid kulul oo ku filan inuu ka dhigo birta dusha korantada qayb ahaan dhalaasho ama xitaa uumi baxdo oo uumi baxdo si meesha looga saaro.
Ulaha garaafka oo leh ul naxaas ah
Badeecadan waxaa loo isticmaali karaa sida kaarboon arc elektaroonig ah tiknoolajiyada alxanka birta. Udubka kaarboonku qaanso-goobeedku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka waxtarka sare, buuqa yar iyo ku-habboonaanta ballaaran. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa shubista, kuleylka, dhismaha markabka, warshadaha kiimikada iyo warshadaha kale si loo qiyaaso kaarboon yar, bir bir ah, bir bir ah, naxaas iyo biraha kale.